Conveyor roller dia singa ao amin'ny rafitry ny conveyor fehikibo satria manome fanampiana amin'ny enta-mavesatra sy amin'ny lafiny miverina.
Mpanamboatra mpamokatra singa mpampita haitao avo lenta
Kalitao tsara, Serivisy ary serivisy ho an'ny mpanjifa
Mpanaparitaka feno an'i Joyroll
kamo, roller, pulley mihaona na mihoatra DIN, AS, JIS, CEMA, SANS-SABS, GOST, AFNOR Standard sns.
Famaritana The rubber di ...
Famaritana Ity vy sp ...
Famaritana Troughing / Car ...
Famaritana ny id miverina ...
Famaritana ny fanitsiana tena ...
Famaritana Impact roller ...
Famaritana Ruben Laggin ...
Fanoritsoritana Impact idle ...
Famaritana ny vy spi ...
Hebei Joyroll Conveyor Machinery Co., Ltd. naorina tamin'ny 2008, dia mpanamboatra matihanina amin'ny fehikibo conveyor sy ny faritra. Ny orinasa misy anay dia miorina amin'ny valan-javaboahary feixiang, tanànan'ny tanana, faritany hebei, Sina, manarona 33000 metatra toradroa. Ny orinasanay dia manana ny tsipika famokarana automatique mandroso iraisam-pirenena mandroso iraisampirenena, mandroso ny tsipika famokarana vovoka elektrostatika, ary fitaovana fitiliana mpanelanelana feno mpanera ...
Janoary / 06/2021